यौन, युवा र उर्जाः सम्भोगदेखि समाधीतर्फ – Hamrosarokar
By Hamrosarokar	 On ४ असार २०७७, बिहीबार २०:५१
वास्तविकता त यति मात्र हो कि म मानिसहरुलाई कामवासनाबाट मुक्त गर्न चाहन्छु । प्रचार त उनीहरुले गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले गरेको प्रचार कसैले देख्दैनन् । किनकी उनीहरुको हजारौ वर्षदेखिको परम्परा सुन्दा सुन्दा हामी अन्धो र बहिरो भइसकेका छौ । उनीहरुले के भनिरहेका छन् मात्र हाम्रो ख्याल रह्यो ।
पोस्टरहरु यिनै गुरुको कृपाले लगाइएको हुन्छ किनकी यिनीहरु स्त्री(पुरुषलाई भेट्न दिदैनन् । नजिक बस्न दिदैनन् । जसले गर्दा मानिसहरु फोहोरी किताब पढ्न, फोहर तस्वीर हेर्न तथा फोेहोरी फिल्म बनाउन बाध्य छन् । यस्ता फिल्म आफै उत्पत्ति पनि हुँदैन । यो भनेको मानिसको आवश्यकता हो ।
यो माग कसरी पैदा भयो त ? त्यसलाई हामीले पैदा गर्‍यौंै । स्त्री-पुरुषलाई एक अर्काबाट टाढा राखेर हामीले त्यसको माग पैदा गर्‍यौं । त्यो मागलाई पूरा गर्न कुनै व्यक्ति जान्छ, हामीलाई लाग्छ, गलत भईरहेको छ । त्यसैले, बाधा खडा गरिन्छ । किनकी उसको बाटोमा जति धेरै अवरोध खडा भयो, आफ्नो माग पूर्तिका लागि ऊ त्यति नै धेरै नयाँ-नयाँ बाटो खोज थाल्छ । किनकी मागले पूर्ति त खोज्छ ।
यहाँको पुलिसले के हेरिरहेको छ रु पुलिसहरु यस्ता कुरा किन बन्द गर्दैनन् ? यो कस्तो अश्लील देश रहेछ रु पाँच सय मानिसको बीचमा बसेर यिनीहरु आँखा बन्द गरेर पे्रममा लिप्त भएका छन् । प्रेम प्रकट गरिरहेका छन् । , आखिर यिनीहरु कस्ता मानिसहरु हुन् रु यस्तो असहनीय छ । पुलिस के गर्दै छ भन्दै उनी त्यही हेर्थे ।
तपाइलाईर् किन समस्या भइरहेको छ रु न तपाईलाई कसैले अंगालो मारेको छ, न त कसैले तपाईलाई प्रेम गरिरहेको छ ।
त्यहाँबाट फर्केर मेरो मित्रले भने, म यति धेरै त्रसित भए की मलाई लाग्यो यी कस्ता व्यक्ति हुन् । पछि विस्तारै विस्तारै उनले पनि बुझ्दै गए की गलत उनी नै थिए । हाम्रो देश नै एक अर्काको ताकझाक गर्नमा तल्लिन छन् कि कसले के गर्‍यो, कसको घरमा को गयो इत्यादी । यो भनेको बदमासी हो । संस्कार नभएको हो ।
यसबारे जति पनि नयाँ खोज भएका तिमीहरु उक्त खोज पढ्नु , त्यसबारे चर्चा गर्नु र सेक्सबारे बुझ्ने प्रयास गर्नु कि के हो यसको मेकानिज्म रु यसको यन्त्र के हो ? के हो यसको प्यास रु प्राणभित्र लुकेर बसेको यसको राज रु यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने । यसबारे टाढिएर कहिल्यै नभाग्नु । सेक्सको कुरा सुनेर कहिल्यै आँखा नचिम्लनु ।
प्रतिभाको जन्म त त्यही दिनमात्र सम्भव छ, जुन दिन यस देशले सेक्सलाई सहज रुपमा स्वीकार्नेछ । यसलाई जीवनको एउटा तथ्यको रुपमा अंगिकार गर्नेछ-प्रेमले, मायाले । निन्दा गरेर हैन । र यसमा निन्दा गर्नुपर्ने, घृणा गर्नु पर्ने कुनै कारण पनि छैन ।
के तपाई सेक्स उर्जा बढाउन चाहनुहुन्छ ? नियमित यसो…
नेपालको संविधान संशोधन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण
पर्वतका ५ जना चिकित्सकमा कोरोना स‌ंक्रमण पुष्टि